MOV कन्भर्टर प्रो म्याकको लागि, सीमित समयको लागि नि: शुल्क म म्याकबाट हुँ
आज भित्र म म्याकबाट हुँ म तपाईं लाई ती अनौंठनीय प्रस्तावहरूको अर्को ल्याउँदछु जुन तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न, विशेष गरी यदि तपाईं अझै तपाईंको म्याकमा यस प्रकारको उपकरण छैन भने। iWork, iMovie र GarageBand नि: शुल्क हुन्छन्अब यो पालो आयो MOV रूपान्तरक प्रो, एक पूर्ण र उपयोगी उपकरण जुन तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि भिडियोलाई कुनै पनि ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुहोस्। तर त्यो सबै छैन।
MOV रूपान्तरक प्रो एक धेरै सरल र सहज डिजाइनको साथ एक अनुप्रयोग हो, व्यावहारिक रूपमा सबै भन्दा लोकप्रिय अडियो र भिडियो स्वरूप संग उपयुक्त। के तपाईंले एक अनौंठो ढाँचामा यस्तो चलचित्र डाउनलोड गर्नुभयो जुन तपाईंलाई आफ्नो यात्रामा आइकन तपाईंको आईप्याडमा लिनबाट रोक्छ? त्यसो भए MOV रूपान्तरक प्रो समाधान हो, र अब, सीमित समयको लागि नि: शुल्क.
एक ढाँचाबाट अर्को ढाँचा, नि: शुल्क, संग MOV रूपान्तरक प्रो
En म म्याकबाट हुँ हामीले पहिले नै तपाईंलाई यस्तै अनुप्रयोगहरूको प्रस्ताव गरेका छौं MOV रूपान्तरक प्रो त्यो बिक्रीमा भएको छ। र आज, हामी यो गर्न रोक्न सक्दैनौं किनभने तपाईंको कम्प्युटरमा यस्तो उपकरण भएकोले तपाईंलाई एक भन्दा बढी समस्याबाट मुक्त गर्न सक्दछ।
मूलतः, MOV रूपान्तरक प्रो एक भिडियो कन्भर्टर हो म्याकको लागि। यदि तपाईंले एक ढाँचामा भिडियो डाउनलोड गर्नुभयो जुन तपाईं आफ्नो म्याकमा प्ले गर्न सक्नुहुन्न, तपाईंको आईप्याडमा वा अन्य कुनै उपकरणमा, यो अनुप्रयोगको साथ तपाईंले समाधान फेला पार्नुहुनेछ जस्तो कि यो छ लगभग सबै भिडियो ढाँचा संग संगत (MP4, FLV, WMV, AVI, MOV, MPG…) ताकि तपाईं आफ्नो भिडियो एकबाट अर्को ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ।
तर पनि, संगै MOV रूपान्तरक प्रो तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंको भिडियोबाट अडियो फाईल निकाल्नुहोस् यसलाई अडियो ट्र्याकको रूपमा बचत गर्न (संगीत भिडियोहरूको लागि उत्तम)।
फाइनल कट प्रो, iMovie, र अन्य रूपमा प्रसिद्ध अनुप्रयोगहरू द्वारा बनाईएको भिडियो सम्पादन गर्नुहोस्। यी सम्पादन कार्यहरूमा समायोजन कन्ट्रास्ट, चमक, संतृप्ति, वाटरमार्कहरू थप्न, बहु भिडियोहरू मर्ज गर्न, यसलाई फ्लिप गर्ने, र अधिक समावेश छ।
MOV रूपान्तरक प्रो १ price .19,99 € को नियमित मूल्य छ तर अब तपाईं यसलाई सीमित समयको लागि पूर्ण निःशुल्क पाउनुहुनेछ। याद राख्नुहोस् कि म म्याकबाट हुँ किनकि हामीसँग यस पदोन्नतीको साथ केहि छैन, र हामी केवल यस पोष्टको प्रकाशनको समयमा यसको मान्यताको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं, त्यसैले, दौड!
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक प्रोग्रामहरू » MOV कन्भर्टर प्रो म्याकको लागि, सीमित समयको लागि नि: शुल्क